Matoanteny mpanampy - Wikipedia
Ny matoanteny mpanampy dia matoanteny ampiasaina miaraka amin'ny endriky ny matoanteny toy ny ova-matoanteny mba hanehoana filazam-potoana na fanehoan-javatra ao amin'ny fiteny sasany. Ao amin'ny fiteny frantsay dia ampiasaina ho matoanteny mpanampy ny matoanteny être sy avoir. Ao amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina ho mpanampy ny matoanteny be sy have. Tsy ireo ihany no matoanteny afaka misahana ny anjara asa mpanampy fa ao koa ireo matoanteny entina milaza fotoana toy ny aller sy venir sy ny hafa koa ao amin'ny fiteny frantsay sy ny matoanteny go sy ny hafa koa ao amin'ny fiteny anglisy. Tsy matoanteny ny mpanampy ao amin'ny fiteny malagasy fa sokajin-teny hafa. Tsy afangaro ny hoe matoateny mpanampy sy ny hoe matoanteny andry.
Ireto avy ireo karazana matoanteny mpanampy: ny matoanteny mpanampy fotoana sy ny matoantany mpanampy fanehoan-javatra sy ny matoanteny mpanampy filaza ary ny matoanteny mpanampy fiendrika.
1 Matoanteny mpanampy filazam-potoana
2 Matoanteny mpanampy fanehoan-javatra
3 Matoan-teny mpanampy filaza
4 Matoanteny mpanampy fiendrika
Matoanteny mpanampy filazam-potoanaHanova
Ny fiteny frantsay dia mampiasa ny matoanteny aller sy venir ho mpanampy filazam-potoana (manampy ny endrika tsy mitanisan'ny matoanteny reniteny), ka ny aller milaza ny hoavy akaiky ary ny venir ny lasa vetivety. Tsy ampiasaina ivelan'ny filazam-potoana ankehitriny (français: présent) sy lasa tsy efa (français: imparfait) anefa izy ireo. Ny matoanteny devoir dia manjary mpanampy filazam-potoana ihany koa. Ny matoanteny être sy avoir (na ireo matoanteny mitovy fiaviana aminy ao amin'ireo fiteny romana hafa) izay tokony ho mpanampy fanehoan-javatra dia nanjary mpanampy filazam-potoana. Toy izany koa no miseho amin'ireo fiteny romana hafa toy ny fiteny espaniola sy italiana sy portogey sns. Amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina ho mpanampy filazam-potoana hoavy ny matoanteny will sy shall.
Matoanteny mpanampy fanehoan-javatraHanova
Ny fiteny frantsay dia mampiasa ny matoanteny mpanampy être sy avoir miampy ny ova-matoanteny lasa ho an'ny fanehoan-javatra efa. Lasa maneho fotoana izy ireo matetika ka mahahadino ny maha mpanampy fanehoan-javatra azy ireo. Ny fiteny anglisy koa dia mampiasa ny matoanteny mpanampy have miampy ny ova-matoanteny lasa ho an'ny fanehoan-javatra efa.
Ny fiteny anglisy dia mampiasa ny matoanteny mpanampy be miampy ny ova-matoanteny anehitriny ho an'ny fanehoan-javatra mitohy. Toy izany koa no miseho amin'ireo fiteny romana hafa toy ny espaniola sy italiana sy portogey sns. Amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina ho mpanampy fanehoan-javatra mahazatra ny matoanteny will.
Ny matoanteny frantsay sasany toy ny se mettre à sy ny être en train de ary ny finir de dia atao matoanteny mpanampy fanehoan-javatra hilazana ny fanombohana sy ny fitohizana ary ny fahataperana.
Matoan-teny mpanampy filazaHanova
Amin'ny fiteny frantsay dia ampiasaina ho mpanampy filaza ny matoanteny pouvoir sy devoir sy sembler ary paraître. Ny fiteny anglisy dia manana ireto matoanteny mpanampy filaza ireto: can, may, must, shall ary will; manampy azy ireo ny matoanteny ought sy need ary dare.
Matoanteny mpanampy fiendrikaHanova
Ny matoanteny être arahin'ny ova-matoanteny dia ilazana ao amin'ny fiteny frantsay ny fiendrika anoina. Ny fiteny anglisy koa dia mampiasa ny mpanampy be arahin'ny ova-matoanteny hanehoana ny fiendrika anoina. Toy izany koa no miseho amin'ireo fiteny romana hafa toy ny espaniola sy italiana sy portogey sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matoanteny_mpanampy&oldid=971646"
Dernière modification le 23 Jiona 2019, à 12:00
Voaova farany tamin'ny 23 Jiona 2019 amin'ny 12:00 ity pejy ity.